Su'aal: Baaritaanka aan soo diray?
Author Topic: Su'aal: Baaritaanka aan soo diray? (Read 10955 times)
« on: January 31, 2017, 07:31:35 PM »
asc dhamaan dhaqaatirta waxan rabay inaad iga jaahil bixisaan baritaanka natiijada kasoo baxday aan soo diray ma wax dhibaataa ayaa jira o dhaqtarku iga qariyaa si aanan u nixin. anigu aqoon uma lihi hawlaha cafimaadka hadan waxa iga muuqata sida kuqoran warqada an so diray inay kala waynyihin cabirka labada xaniinyood mawax iska caadiyaa ama dhibaata jirta waa mahadsantihiin
Re: Su'aal: Baaritaanka aan soo diray?
« Reply #1 on: February 28, 2017, 01:42:18 PM »
asc dhamaan dhaqatirta somalidoc wad ku mahadsantihin sida ad isugu xilqaanten inaad bulshada wacyigalin cafimaad aad siisan insha'alahu alle waxan idinkaga rajayna inuu misaanka xasanaadka idinkugu dara.
hadan u gudbo su'aashayda waxan inbadan kacabanayay dhibaato iga haysata dhanka xaniinyaha ama dhikilaha. labaduba way i xanuunan wax xidido aad modid a ku jiro markan tabto. labo jeer ban is baray o computer isi saray marki hore kaniini ba la iso qoray waxna kama helin. marki danbana dhaqtar kale ban u tagay wuxu i diray computer jawbtina wuxu dhahay wa cadi xaniinyahagu marka waxan raba inaan dhaqaatiirta lawadaago natiijadii kaso baxday baritaanka .
waana sidan hoos ku xusan
Average sized measuring 34×19mm with normal homogenous echopattern
No focal lesion or masses
Relative small sized Rt test measuring 20×15mm with normal homogenous echopattern
Average sized epididymi with normal homogenous echopattern
Pampiniform Plexus :
Average daimeter of pampiniform plexus .
waxan rabaa inaad iga jaahil bixisaan baritaanka natiijada kasoo baxday aan kor ku xusay ma wax dhibaataa ayaa jira o dhaqtarku iga qariyay si aanan u nixin.
Anigu aqoon uma lihi hawlaha cafimaadka hadan waxa iga muuqata sida kuqoran warqada kor kuxusan inay kala waynyihin cabirka labada xaniinyood mawax iska caadiyaa ama dhibaata jirta waa mahadsantihiin
« Reply #2 on: March 01, 2017, 10:40:46 PM »
Dr aad ayad u mahadsan tihiin sidaad nooga jaahilsartaan suaalaha aan idin waydiino.
Dr waxan ahay 22 year old girl waxan dhalay hal wii waliba operation ayan ku dhalay, waxan ciyara gym kadib waxa xoog ii xanunay cagaha waliba qaybta jilibka ka saraysa dhuuxa ama halka kubka loo yaqaano, gymta waxan waday mudo bil ah xanuunkana igama bi,in dusha lagama taaban karo garacna wanka daremaya marka dactor ma wax iska dabiicj ah mise waa xaalad kale thankz
Su'aal: Baaritaanka dhiiga malagu ogaan karaa cudur kasta?
Views: 4340 October 19, 2016, 07:18:46 PM
Baaritaanka Dheecaanka Uur-jiifka ku Hareereysan (Amniocentesis)
Views: 7648 May 06, 2011, 08:24:58 PM
Su'aal: muxuu yahay baaritaanka minka?
Started by Deeqe LuulBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 12298 August 14, 2011, 02:24:11 PM
by Deeqe Luul
Qeybaha Baaritaanka Indhaha
Started by SomaliDocBoard Cudurrada Indhaha
Views: 17465 April 12, 2008, 02:56:35 AM
Su'aal: Baaritaanka ESR muxuu sheegaa?
Views: 5849 August 26, 2015, 02:41:47 PM